15 sano iyo in ka badan 270 milyan oo doolar oo ay ku mahadsantahay xiriirka ay la leedahay (RED) | waxaan ka imid mac
Apple waa shirkad tignoolajiyadeed. Waan wada ognahay taas. Midda aan la dafiri karin ayaa sidoo kale ah in ay tahay shirkad doonaysa in ay tallaabo hore u qaado taasna waxaa ku cad ballan-qaadyo kala duwan oo ay samaysay. Wuxuu rabaa inuu dhex dhexaad ka noqdo Kaarboonka sii daaya 2030. Shuruudaha mustaqbalka 10 sano ka hor, laakiin dhammaantood maaha ballanqaadyo. Maskaxda ku hay in aad hore u leedahay khibrad dacwadeed oo la mid ah. Wax kale ha qaadan oo waxba ha yarayn 15 sano ka caawinta dadka kale tabarucaad lacageed oo xilliyo ah si ay u caawiyaan cilmi-baarista si ay isugu dayaan in la ciribtiro AIDS, gaar ahaan Afrika. Waxayna ku taal qaaradaas halka ay ku sii socoto inay hadda u noqoto shirkad leh masiibada uu dhaliyay COVID-19.
Apple waxa ay shan iyo toban sano la shaqaynaysay ururka (RED) si xal loogu helo aafadan AIDS-ka ah. Gaar ahaan wadamada ugu baahida badan. Lacagta ay Apple ku ururiso iibinta alaabada cas, ayaa loogu talagalay daraasadda ciribtirka cudurkan. Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro 2020, 2021 iyo 2022 lacag ayaa loo qoondeeyay si loo yareeyo cawaaqib xumada kaliya maahan caafimaadka laakiin sidoo kale dhaqaale iyo bulsho waxay keentay faafitaanka cudurka Coronavirus adduunka oo dhan laakiin gaar ahaan qaaradda Afrika.
Dhab ahaantii, Apple waxay sii wadi doontaa inay gacan ka geysato naaxinta maaliyaddaas ka dhanka ah masiibada iyadoo u qoondaynaysa 50% faa'iidada kuwaas oo lagu helay iibinta kuwa alaabta la doortay.
Ilaa hadda, waxa u suurtagashay in ay ururiyaan ku dhawaad ​​270 milyan oo dollar iyo sidaas darteed ururka (RED) iyo Apple waxay rabeen inay si wadajir ah u dabaaldegaan midowgaas oo leh muuqaal la soo galiyay ku socda kanaalka YouTube ee ururka.
(RED) iyo Apple waxay leeyihiin taariikh wadaag ah oo ku saabsan dagaalka lagu joojinayo HIV / AIDS. Shuraako ahaan (RED) ahaan muddo 15 sano ah, Apple waxa ay u ururisay ku dhawaad ​​$270 milyan Sanduuqa Caalamiga ah iyada oo loo marayo iibinta (Alaabada) Qalabka Casaanka ah iyo agabka. Iyada oo COVID uu ku hanjabayo inuu baabi'in doono horumarka laga sameeyay ilaa hadda la dagaallanka AIDS-ka, Apple waxa ay macaamiisheeda ka hawlgelinaysay la dagaallanka labada aafo sanadka oo dhan iyo waqtiyada muhiimka ah oo dhan Bakhaarka App-ka, is dhexgalka Apple Pay, iyo ka qaybgalka shaqaalaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » 15 sano iyo in ka badan 270 milyan oo doolar oo ay uga mahadcelinayaan la shaqaynteeda (RED)
Muraayadaha AR ee Apple waxay qaadi doonaan lensyada Pancake sida uu qabo falanqeeyaha Kuo